Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ozi Na -agbasa Ozi Philippines » Onye isi ala Philippines hapụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị » Page 2
Akụkọ ịkụ ọkpọ bụ Manny Pacquiao bụ onye mbụ tinyere akwụkwọ maka ịzọ ọkwa onyeisiala na Fraịde.
Onye isi obodo Manila Francisco 'Isko' Moreno, ya na senator na onye bụbu onye uwe ojii Panfilo Lacson, ekwupụtakwala ebumnuche ha ịzọ ọkwa ọchịchị.
Ndị nyocha na -ekwu na ọ dị oke mkpa na Duterte nwere onye ga -anọchi anya ya nke ga -egbochi ya ime ihe iwu nwere ike ime - n'ụlọ ma ọ bụ Courtlọikpe Na -ahụ Maka Mpụ na Mba - maka ọtụtụ puku ogbugbu steeti na agha ya na ọgwụ ike kemgbe 2016.
"Aga m eji nnu nnu were ọkwa ya," Carlos Conde, Philippines onye nyocha maka Human Rights Watch nke nọ na New York, kwuru. “Ma na -eche na ọ ga -ala ezumike nka n'ezie, nke ahụ apụtaghị na ọ gaghị enweta nchekwa n'aka ndị otu ICC nke ọ na -achọ. ”
N'etiti September, na Ụlọikpe Criminal International (ICC) na Netherlands bidoro nyocha gbasara ogbugbu mmadụ na mpụ ndị ọzọ emere n'oge agha obi ọjọọ megide ọgwụ ndị Duterte bidoro na Philippines. Mgbe ọ ghọrọ onye isi ala, o kwere nkwa na ya ga -ewepụ ọgwụ ọjọọ na mba ahụ, ma nye ndị uwe ojii iwu ka ha gbaa ndị na -ere ọgwụ ike na ndị riri ahụ anya ma ọ bụrụ na ndị uwe ojii kwenyere na ha nọ n'ihe egwu.
Dabere na data gọọmentị Philippines, mmadụ 6,181 egbuola na mwakpo ndị uwe ojii kemgbe 2016. Agbanyeghị, dị ka ICC, ọnụ ọgụgụ ahụ nwere ike ịdị n'agbata 12,000 na 30,000, na -akọwa omume nke ndị na -eme iwu dị ka "mwakpo zuru ebe niile na usoro megide ndị nkịtị."
Nchọpụta ICC na -eme ntuli aka onye isi ala na -abịanụ dị mkpa maka ogige Duterte, dịka onye na -azọ ndọrọndọrọ ọchịchị ndọrọndọrọ ọchịchị nwere ike mepee onye isi ala ikpe.